Ninkii Afkiisa Malaa’iktu ka hadashay!! Gaaldiid
Bogga Hore > Xogta > Ninkii Afkiisa Malaa’iktu ka hadashay!!
1 Ninkii Afkiisa Malaaiktu ka hadashay:
1.0.1 Si aad u daawato ku dhufo lifaaqan: Daawo
Ninkii Afkiisa Malaaiktu ka hadashay:
Si aad u daawato ku dhufo lifaaqan: Daawo
Ninkii cararay ayaa dib usoo laabtay isagoo leh: nimayahow amaan isiiya iyo nabad galyo. Waxa la yidhi: oo maxaa dhacay? Wuxuu dhahay: oo ma cidbaa ku hadhay magaaladaba, dadkii joogayba way yaaceen oo doomo ayaa la kaxaystay.
Muslimiintii waxay dhaheen: oo maxaa idin helay? wuxuu yidhi: dee ninkaas miyeydaan maqlayn wuxuu yidhi!! waxay dhaheen: Oo ninku muxuu idinku yidhi? Wuxuu dhahay: Ninka afkiisa malaa’k baa ka dhex hadashay wuxuuna yidhi: Heshiis idinlama galayno, illamaayo aan malabka Afraadiin ku cuno timirta Kuuthaa!! (Malabka Afraadiin iyo Timirta Kuutha waxa cuni jiray oo kaliya boqorkooda Yazdajar) Markaasaan garanay in malaa’iktu idinla jirto oo aydaan joogayn illamaa aad ka cuntaan malabkaas, kadibna dadkii way yaaceen oo firdhadeen.
Isaabah fii tamyiiz assaxaabah, majalada 1 aad, bogga 340-341